Jubbaland oo war ka soo saartay shirka wadatashiga ee uu madaxweyne Farmaajo ku dhawaaqay
Maamulka Jubbaland ayaa soo dhaweeyay sheegayna inay ka qeyb-galayaan shirkii uu xalay iclaamiyay in uu Madaxda dowladda iyo dowlad Goboleedyada uga furmayo Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed ayaa sheegay in markii hore Puntland iyo jubbaland ay dalbadeen in shirkaasi la qabto, welina ay diyaar u yihiin qabsoomida shirka u dhaxeeya madaxda dowladda & dowlad Goboleedyada.
Sidoo kale Wasiirka oo la hadlay BBC-da waxaa uu sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu muddo badan ka caga jiidayay in uu shirkaasi dhaco, isla markaana waqtigii loogu talo galay uu kasoo dib dhacay, hayeeshee ay dhankooda shirka ka qeyb-galayaan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa kadib kulan uu Madaxtooyada kula qaatay wakiilada Beesha Caalamka waxaa uu ku dhawaaqay shir ka furmaya Maalinta Berito ah Magaalada dhuusamareeb, kaas oo ay ka qeyb-galayaan madaxda dowladda & dowlad goboleedyada loogana hadlaya xalka gaarista khilaafka doorashooyinka.
Waa fursaddii u dambeysay shirkani oo haduu fashilmo,heshiisna la gaari waayo waxa arrinta ka fariisanaya 05-ta February baarlamanka,xalna ka gaari doono qabashada doorashada iyo bilowgeedaba.
Waxay sharciyayn doonaan xubnaha Banaadir iyagoo wax ka bedel dastuur sameen doona.
Gudiga doorashadu wuxu sheegay in xubnaha Puntland & Jubbaland lagu dooran doono Muqdisho haddii la AF garan waayo shirka furmaya dhawaan.
Ha ka faaiidaystaan oo xalka qayb ha ka noqdaan.
Khadar Jaamac says:
oo hadde xubno Xamar lagu doorto, Somaliland bay keeni lahaayeen hadday wax tarayaan, kol haddii Farmaajo ninna Villada ka saari karin oo xataa Afgooye iyo Balcad Ła geyn karin, oo jeelkaa ku dhexjiro, meel uu ka taliyaana jirin, maxay taraysaa xubno Ła iska qortaas, haddii adduunkaa sidaa ka yeelayo oo nin guri dhexdiisa iska fadhiya lacag ku bixinayanaan dee Shiikh Roobow iyo Sh Daahir Aweys iyagana madaxweyne how aqoonsadaan. Waa dalka yaa isku wada kara, yaa shabaab dagaal dhab ah la geli kara, yaa dadka isku wadi kara baa dunida iyo Somali doonaysaa , Farmaajo kaa ma yahay, Mareexaanka ninka isku keeni kari waayey ee Beledxaawo caawa laga qaxayo, baad Xamar buu dad ku qoran doqon yahow meesha la soo taagan tahay, ma haan baad tahay biyo lagu shubto, caqligaaga miyaanu shaqaynayn, dawladnimada ma taqaanaa, ma guri isku dhex xir baa? ma gobolkaya ciidan baan geynayaa baa? ma Jubbalad 2 ayaan ka dhigayaa baa?
Madaxdweyne Maxamed Abdullahi Farmajo wa nin Sede ah?? wa nin dhalinyoro ah oo lashegay in uu Jamacad uga Baxay wadanka Mareyksnka kana shaqeyey,inkasta oo wax laga shegay wax barashadisa oo Qadatay 15 sano in kabadan,marka uu kumuqdo wa nin Qurxoon oo sharaf ka muqato,marka aad firiso Mamulkisa & muqalkisu isuma Eka,inti uu Talada hayey wadanka hayey khaladad fara badan aya ka dhacay,lama maqal lama arag asago ka xun ama ka garabaya> Xukunkisi waxa ka haray 7 malmod kama muqato wax nidam ah oo udhisan,Golashi Dasturiga ah dhamantod Xilki wa kawada dhamaday,sida Aqalka Sarre,Xildhibanada Qaranka,somaliyed,Ninka Nocas ah waxuu leyahay Lataliyeyal fara badan,kuwasi makhalad ayey kula taliyen mise sax,waxay umuqata kuwo Talo xun oo wadanka meel xun uhorseday.
Farmaajo markuu ra’iisal wasaaraha ahaa wuxuu dal geliyey Kampala Accord ka dib markuu diidey in uu iscasilo.
Hadda waxay u badan tahay in uu dalka gaarsiiyo meel aad u xun oo waxaa suurtagal ah in Soomaaliya lagala noqdo dawladnimada oo lagu celiyo kumeel gaarkii..
Soomaalida ka sokow Beesha Caalamka afka iyo gacanta beey isasaareyn markey arkeyn sida doqonnimada ah oo hogaamiyonimada ka maran tahay uu Farmaajo u dhaqmaayo..
Waa in Farmaajo iyo afadiisa lagu dacweeyo labaatan ka milyan dollar ee dalka ka xadeeyn oo ay saamiga kaga iibsadeyn wershadda sonkorta ee Amina Moge Xirsi ay ka dhiseyso Uganda.
Haye ma haddaad marwada Isaaq ee iska leh wershadda sonkorta ee Uganda Farmaajaa wax Ku leh tidh?
Waxay ka qayb gashay marwada Farmaajo xaflad daah furka sonkorta wershadaas dhawaan iyada iyo Mahdi Guleed,wafti Somaliland ka tegay oo lagusoo casuumay.
Hadalkaagu waa macquul…ninkan layiraah farmaajo ciyaal faa-cali waa unpredictable ama QOF anan Qool la heyn lana aamini karin. Wadanka dagaal sokeeye ayuu galiyay maamul goboledyadii dagaal ayuu ku qaadey siyaasadii gudaha iyo tii dibada wuu ku fashilmey. LAGAMA yaabo inuu soo noqdo haduu soo noqdo waxaa xaqiiqa ah wadanka inta is heysata iney kala-tagi doonto dagaalka Gedo haduu si fiican u bilaaban.